အဝတ်အထည်နှင့် အဆင်တန်ဆာများ - ၀က်၀ံသဘက် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အဝတ်အထည်နှင့် အဆင်တန်ဆာများ classified: အသစ် ၀က်၀ံသဘက်
"ပါးပြင်မှာ နူးညံ့မှုအပေါင်း သရဖူဆောင်းကြမယ် ဟေ့ " ------------------------------------------------ အသားနူးအိ ရေလျော်လည်းမရွဲ ရေစုပ်အားလည်းအရမ်းကောင်းပြီး ခေါင်း မျက်နှာ ခန္ဓာကိုယ် အစအဆုံးသုံးလို့ရပြီး နူးညံ့မှုဆိုတာစျေးနဲ့တောင်မတန် အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ပါနော်✔ 💢အလျား 75cm အနံ 35cm. ... နှစ်ထည်တွဲရောင်စုံလေးရပါမယ် အသားလေးကလည်းနုနုဖက်ဖက် လေးမို့ လာမယ့် Feb 14 မှာ ချစ်သူချင်းမှ မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ စျေးနည်းနည်းနဲ့ သင့်တော်တဲ့ လက်ဆောင်လေးမို့ မှာပြီး လက်ဆောင်ပေးရင် အသင့်တော်ဆုံးပေါ့ 🛒ဝယ်ယူလိုပါက.... EazyliKyaw Onlineshop ကနေ မှာယူနိုင်သလို Onekyat app / Instagram app နှင့် Myanmarkt.com စသည့် website များတွင်လည်း အားပေးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်...🛍 .....နှစ်ထည်အတွဲလိုက် ဆယ်ထည်ဝယ်ယူပါက လက်ကားဈေးနှုန်းလေးရရှိမှာမို့ စိတ်ဝင်စားရင် Page cb သို့ လှမ်းခဲ့ပါနော်..... မှာယူရန်... 📞-09763873764 📞-09699339442.(Viber) "သင့်တင့်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊ မှန်ကန်သောပို့ဆောင်မှုတို့နှင့်အတူ နွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ"